ပွဲ မလန့်ဘဲ ဖျာခင်းသူများ | ဧရာဝတီ
ပွဲ မလန့်ဘဲ ဖျာခင်းသူများ
ရွှေကူမေနှင်း| February 15, 2013 | Hits:5,057
| | ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားလျှက်ရှိသည့် မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေပေါ်တွင် ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ သူများအား ၂၀၁၂ သြဂုတ်လအတွင်း တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
“ပွဲ လန့်တုန်း ဖျာခင်း” ဟူသော မြန်မာ စကားပုံက သူများတွေ အခက်ကြုံနေတုန်း ကိုယ်က နေရာ အမိအရ ယူခြင်းကို ပြောခြင်းဖြစ်၏။ ပွဲလန့်၍ ဖျာခင်းခြင်းက သဘာဝတရား တခုဟု ယူမှတ်နိုင်ပါသေးသည်။ ပွဲပြန်ထိန်းပြီးသွားသော အခါ မူလနေရာ ပြန်ပေးနိုင်မည်မို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ကိစ္စ အသေးစား ဖြစ်၏။
ပွဲလန့်နေစဉ်မို့ ပြေးသူ ပြေး၊ လွှားသူ လွှား၊ အော်သူ အော်၊ ခေါ်သူ ခေါ်၊ တကယ့်ကို ၀ရုန်းသုန်းကား။ ထိုအချိန်မျိုးမှာ သူများ ထွက်ပြေး၍ လွတ်သွားသော နေရာတွင် သူ့ဖျာကို အရဲစွန့်ပြီး၊ စွန့်စားပြီး ခင်းသူက အပြစ်ကြီးလှသည်ဟု မဆိုသာပါ။ နေရာ လွတ်သွားသဖြင့်သာ သူက အရဲစွန့် ခြင်းသာဖြစ်သည်။ နေရာရှင် ပြန်လာလျှင်လည်း ပြန်ပေးရမည်ပင် ဖြစ်သည်။
“ပွဲ မလန့်ဘဲ ဖျာခင်းခြင်း” ကတော့ စွန့်စားမှု မဟုတ်၊ စော်ကားမှု ဖြစ်သည်။ ကိုယ် မပိုင်သော သူတပါးပိုင်သည့် မြေ၌ “လုပ်ရဲလို့ လုပ်တာ၊ မိုက်ရင် ထွက်ခဲ့” ဟု စိန်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရားသော၊ မတရားသော ဂရုမစိုက်။ မိုက်ရဲတယ်၊ ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဟု ရန်လိုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မတရားမှန်း သိလျက် ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သည်လို ကျူးလွန်ခြင်းများကို မသိမသာ ဖြစ်စေ၊ သိသိသာသာ ဖြစ်စေ၊ အရေး မယူနိုင်လျှင် အကဲစမ်းသူများ ပိုမိုလာမည်မှာ သေချာသည်။ သူများ လုပ်လျှင် ကိုယ်လည်း လိုက်လုပ်၍ ရသည်ဟု ထင်ပြီး ရှေ့လူ အားကိုးနှင့် နောက်လိုက်တွေ များလာလိမ့်မည်။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုသော စကားလုံးကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် ဖော်နေကြပါလိမ့်ဟု စဉ်းစားစရာကနေ စိုးရိမ်စရာအထိ ဖြစ်လာပြီ။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ဒီမိုကရေစီ ထင်ပြီး အလွဲတွေ လျှောက်လုပ်၍ မင်းမဲ့စရိုက် ဖြစ်လာလျှင်တော့ တဘက်က “ဥပဒေတွေ၊ ပုဒ်မတွေ” ရောက်လာပေလိမ့်မည်။
တချို့ကလည်း လူတွေကို ဒီမိုကရေစီနှင့် မတန်ဘူးဟု ဝေဖန်နေကြ၏။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘာလဲဟု သင်ပေးရန် စိတ်မကူး အားကြပေ။ မှောင်ကြီး မည်းမည်းတွင် “ရာစုဝက်” နေခဲ့ကြရခြင်း၏ ဆိုးကျိုးကြီးပင် ဖြစ်၏။ ပေးတာယူ၊ ကျွေးတာစား၊ ပြန်မပြောရ၊ တရားနှင့်ဖြေ၊ ကြောက်စေ … ဟူသော စစ်အာဏာရှင်၏ စစ်ဖိနပ်အောက်တွင် မော့မကြည့်ရဲ ခဲ့သော ဘ၀ဆိုးကြီး၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်၏။
နားလည်မှု လွဲခြင်း သည် ရှင်းရခက်သည်။
နား၏ မလည်ခြင်းကမှ နားလည်အောင် ရှင်းရ လွယ်သည်။
တလွဲ နားလည်နေခြင်းကိုတော့ ပထမ အလွဲကို ဖြေပြီးမှ နောက် အမှန်တခုကို ပေးရခြင်း ဖြစ်ရာ ပိုခက်သည်၊ ပိုကြာသည်။ အလွဲကို ရှင်းရခြင်းကား သင်ရခြင်းထက် ခက်လေသည်။
အလွဲတကာ့ အလွဲဆုံးတွင် ယုံကြည်မှု အလွဲက ရှင်းဖို့ အခက်ဆုံး ဖြစ်၏။ ထို တလွဲ ယုံကြည်မှုကြောင့်လည်း မိဘရိုးရာ ကိစ္စများ၊ ကိုးကွယ်မှုများကို မှားမှား မှန်မှန်၊ ပယ်မချနိုင် ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘုရင်တွေ အာဏာလုကြ၊ သတ်ကြသော ကိစ္စ၌ ရေချသတ် (ရေနှစ်သတ်) ပြီးသော စကြာ မင်းသားလေးကို ဘိုးဘိုးအောင်က လာကယ်သွားသဖြင့် အသက်ရှင်နေသည်၊ မကြာမီ ပြန်လာမည် ဆိုသော ၀ါဒဖြန့်မှုကို မြန်မာများ ယုံကြည်ခဲ့ကြဖူးသည်။ မျှော်ရင်း မျှော်ရင်း … ယုံကြည်ရင်း… အားကိုးရင်း … နှင့် မိမိကိုယ် မိမိ အားကိုးချင်စိတ် ပပျောက်ခဲ့ကြသည်။
ယခုလည်း ဒီမိုကရေစီ စတော့မည် ဆိုကတည်းက “မင်းလောင်း” ကို မျှော်ခဲ့ကြ၏။ သည်တခါတော့ဖြင့် တို့မင်းလောင်း လာချေပြီ ဆိုပြီး လက်ခမောင်းခတ် ကြ၏။ အစစ အရာရာ ပြီးမြောက်တော့မည်ဟု ထင်ခဲ့ကြ၏။ ဤ အားကိုးမှုက သူတို့အား တလွဲ လမ်းကြောင်းသို့ ပိုနေမှန်း သူတို့မသိကြ။
“ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီ။ တို့လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ရပြီ”
တကယ်ပင် ဤအတိုင်း ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့ မင်းလောင်းကို ပန်းကုံးတွေစွပ် ကြသည်။ ထီးတော် မိုးကြသည်။ အားလုံး ရပြီဟု ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ နားလည်ထားသည့် ဗဟုသုတက ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ မဲသာသူ နိုင်စတမ်း။ ဒါပေမယ့် ပါလီမန်ထဲမှာ ဘယ်နှနေရာ ရှိမှန်း မသိ၊ ကိုယ့်လူတွေ ဘယ်နှဦး ရောက်သွားမှန်းမသိ။ အရာရာ ရတော့မည်ဟုပဲ ယုံသည်။
ဤတွင် ဖျာခင်းသူများ ပေါ်လာတော့၏။
နာဂစ်ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းမှာ လယ်တွေ ပျက်ခဲ့တာ မှန်၏၊ အလုပ်တွေ ပျက်ခဲ့တာ မှန်၏၊ ရန်ကုန်တက်လျှင်ဖြင့် နေ့စား ၂ ထောင်ဆိုတော့ သွားရည်ကျတာ မှန်၏။ ရန်ကုန် သွားလာ စရိတ်၊ စားသောက်စရိတ်ကို မမှု၊ ဖြစ်သလို နေကြမည်၊ နေရာလွတ်တွေ့လျှင် တဲထိုးနေမည်။ လွယ်လွယ်လေး။
ဤယုံကြည်ချက်များနှင့် ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံး တွေမှာ “ကျူး”ဟု အတိုကောက် ခေါ်ကြသော ကျူးကျော်တဲတွေ နေ့ချင်း ညချင်း ပေါ်လာသည်။ မူလ မြေပိုင်ရှင်များနှင့် အခြေအတင် ဖြစ်ကြသည်။ ကြားဝင် ဖျန်ဖြေသူများ ပေါ်လာသည်။ ပြေလည်တာလည်း ရှိ၊ မပြေလည်တာလည်း ရှိ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွှေ့ပြောင်းစရိတ် လေးငါးသောင်းရလည်း အလုပ်မလုပ်ဘဲ အလကားနေရ နည်းရော့လား။
ဟိုမှာ ပြဿနာ၊ သည်မှာ ပြဿနာ။ ပြဿနာတွေ ရှင်း … မရ။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ ရက်မှာကား တကယ် နေစရာမရှိ၍ ဖြစ်သမျှ ကြုံသမျှ ဆိုပြီး “ကျူး” လူများ မဟုတ်၊ အလုံးအရင်းနှင့် ကျူးဖြစ်လာကြသူတွေ၊ နေ့ချင်း ညချင်း “ကျူး” အမည်အောက် ၀င်ရောက်လာကြသူတွေ။
မှန်သည်။ နေ့ရော ညပါ အိမ်ဆောက်နေကြသည်။ တဲ မဟုတ်ပါ။ ၁၅ ပေ ပတ်လည် လောက် ဆိုတော့ အိမ်ပါပဲ။ဆောက်ကြပုံက ၀ုန်းကနဲ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏။
၀ါးဓနိတိုင်များ ချက်ချင်း ပေါ်လာသည်။ ၁၈ ဧက ဟူသော လယ်မြေဟောင်းမှာ တပေမျှပင် မလွတ်ရအောင် စနစ်တကျ နေရာယူကြသည်။ သူ့အတန်းနှင့်သူ။ လေး အိမ်တွဲ၊ ငါးအိမ်တွဲတွေပါသည်။ တအိမ်ကို ကျပ် ၁ သိန်းမကုန်ဘဲ သည်လို မဆောက်နိုင်ပါ။ ၀ါးတိုင်၊ ၀ါးကတ်မိုး၊ ၀ါးထရံကာ ဆိုလျှင်ပင် ၁ သိန်းနား ကပ်နေပြီ။ တဲ အရွယ်မှ မဟုတ်ဘဲ။ အိမ်တွေပါ။
သည်တော့ … သည်လို တပြိုင်နက်တည်း ပေါ်လာသည့် ဖြစ်စဉ်၏ နောက်ကွယ်မှာ တစုံတရာ မရှိဘဲ ဖြစ်မလာနိုင်။ မရှိ ဆင်းရဲသားများ အနေနှင့် အခု ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်။ ဒါဆိုရင် ဘာလဲ။
တွေးတတ်လျှင် … တကယ့်ကို စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပါသည်။ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်ကလဲ၊ ဘာအတွက် လုပ်တာလဲ။
ရန်စတာ ဆိုတာက သေချာနေသည်။ သည်လို တပြုံကြီး ၀င်ဆောက်တော့ ရဲက သွားတား၏။ ရဲကို ခဲတွေနှင့် ပစ်ပေါက်ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး ကင်းမဲ့သွားပြီလား…။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ဘယ်မှာလဲ။
မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သွားတား၏။ ၀ါးလုံးရှည်များဖြင့် ဆီးရိုက်ကြရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာ ရသွားသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အာခံခြင်းလား။
အိမ်ဆောက်သူများကား ပျော်ပျော်ပါးပါး။ ခေါ်ကြ ငင်ကြ။ ဘုရားပွဲဈေးခင်းဖို့ လုပ်နေကြ သလား ထင်ရ၏။ သည်ရပ်ကွက် အနီးမှာ မြေဈေးတွေ မြင့်တက်နေတာ သူတို့ သိသည်။ သည်ရပ်ကွက် အနီးမှာ စီးပွားရေးဇုန် လုပ်မှာ သူတို့ သိသည်။
ဒီမိုကရေစီခေတ် ရောက်ပြီ။ အိမ်ဖယ်ခိုင်းလျှင် လျော်ကြေး ပေးရမည်။ တအိမ်ကို ကျပ် ၅ သိန်းဆို နည်းလား။ ရွာကို ပစ်လာခဲ့တာ မှန်နေပြီ။ အုံလိုက် ကျင်းလိုက်မို့ မှုစရာ မရှိ။ လေး ငါးအိမ်ပိုင်သူက သိန်း ၃၀ လောက် တွက်ချေကိုက်ပြီ။ အရင်းစိုက် ပေးသူနဲ့ တ၀က်စီ ခွဲယူရဦးတော့ … အထုပ်က မငယ်တော့။
ဟိုဘက် ရပ်ကွက်က စောစောရောက်ပြီး နေရာယူခဲ့သူတွေ ကွန်ကရစ်လမ်းမကို မေးတင်ပြီး ဆောက်ထားကြတာ၊ ဈေးဆိုင်တွေနဲ့၊ မီးချောင်းတွေနဲ့၊ မီးစက် လာမောင်းသူတောင် ရှိနေပြီ။ တီဗီတွေနဲ့ အခန့်သား။ ဒါ … ကျူးကျော်လား။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အထက်ကို တင်ပြထားသည်။ အထက်ပြီး အထက် … နောက် အထက်။ တုတ် တပြက်၊ ဓား တပြက် ဖြစ်လျှင် ဘယ်သူ နစ်နာမလဲ။ တုတ်ထက် တန်ခိုးကြီးသော လက်နက် လာလျှင် ဘာဖြစ်မလဲ။ အားလုံးကို သိမ်းကျုံးသွားလျှင် ရော …။
သူတို့ ဆောက်လုပ်ရေး သမားတွေထဲတွင် မိန်းမတွေလည်း ပါသည်။ တရားဝင် အလုပ်လုပ်နေသည်ဟု ထင်ချင်လည်း ထင်နေနိုင်သည်။ လာ တားလို့ကတော့ ဓားကြည့်ဟု နှိုးဆွသူလည်း ရှိသည်။ ပြီးတော့ အသံထွက် ကြွေးကြော်လိုက်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်နာမည်ကို တလွဲသုံးပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်နေကြပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်သာ ရှိရင် ဘယ်လို ပြောမည်မသိ။ ယခင် မြန်မာ့အသံမှ တနှစ် တခါ အာဇာနည်နေ့တိုင်း အသံလွှင့်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်က “လွတ်လပ်ပြီ ဆိုပြီး လမ်းမပေါ် ဆေးရိုး လှန်းချင်ကြတယ်” ဟု အားမာန် အပြည့်နဲ့ ပြောခဲ့သည်ကို မှတ်မိနေသည်။
အမှန်တကယ်တွင်မူ လွတ်လပ်ရေးရပြီ၊ ဒီမိုကရေစီရပြီ ဆိုပြီး ထင်ရာစိုင်းလုပ်လို့ မရပါ။ တလွဲအသိနဲ့ တလွဲအမြင်နဲ့ တလွဲ လုပ်ကိုင်တာမျိုး မဖြစ်ရပေ။
သူတို့ သိထားသည်က ကျပ် ၅ သိန်း ရလည်း မနည်းဘူး ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ တဖန် ကျူးကျော်တဲတွေကို အရမ်း မဖျက်ရ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပြီးတော့ လူထုဆန္ဒ ဖော်ထုတ်တာ ဟု လည်းကောင်း၊ နောက် ဒီမိုကရေစီရပြီ၊ တို့လုပ်နိုင်ပြီ၊ တို့ကို မထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ် ဟူ၍လည်းကောင်း … စသည်ဖြင့် ဖြစ်၏။
သို့ရာတွင် ထို့ထက်ပို၍ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြည့်လျှင် … အေချမ်းသာယာသော လူ့ဘောင်ကို တမင်ဖျက်ဆီးလိုစိတ်နဲ့ နောက်ကွယ်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အားပေးလှုံ့ဆော်သူ ရှိနေခြင်းပေလော။ စဉ်စားရင်း စိုးရိမ်လှပါသည်။ ။
မျိုးစောင့်ဥပဒေ လက်မခံကြောင်း ဆရာတော်ကြီးများပြောဘာသာရေး ပဋိပက္ခ ဖန်တီးမှု အရေးယူမည့် ဥပဒေရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းရန် တောင်းဆိုထိမ်းမြားမှု ဥပဒေသစ်ပြုရေး ဦးဝီရသူ တိုက်တွန်းမန္တလေးက ဆန္ဒပြသူများ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ၆ ခုတွင် ညမထွက်ရ အမိန့် သက်တမ်းတိုး နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Sandra Lin February 15, 2013 - 5:41 pm	Here the author, ရွှေကူမေနှင်း, is blaming the squatters. The question here is who owns the land in the first place. It is quite likely that the land in dispute was confiscated without compensation from the poor farmers who were evicted forcibly, a.k.a land grabbing. They were then sold to current “owners” by corrupt government officials. This piece would beamuch balanced one if you include these facts.
Reply	မိုးမြင့်ကျော် February 15, 2013 - 5:57 pm	ရွှေကူမေနှင်း နှင့် ဧရာဝတီကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြေခံလူတန်းစား အချို့မှာ လုပ်သလိုမဖြစ်တော့ ဖြစ်သလိုလုပ်ရင်း အချောင်နေ အချောင်စား အရသာကိုသိလာကြသည်။ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် မရှိတော့၊ ဘယ်လိုအချောင်ရမလဲ အမြဲစဉ်စားနေတော့သည်။ တောကြောင်အချောင်သမားကြီးတစ်ချို့ကလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲရင်း ကယ်တင်ရှင် ဟု ခံယူနေကြသည်။ ရှက်စရာကောင်းလှသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်း အပြင်းအထန် အလုပ် မလုပ်သရွေ့ ဘယ်တော့မှ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကောင်းမည် မဟုတ်ပေ။ တိုင်းပြည်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျသည့် အခြေအနေဖြစ် သဖြင့် မီဒီယာ များက အခြေအနေအဖြစ်မှန်ကို ဖေါ်ထုပ်သင့်သည်။
Reply	ml February 16, 2013 - 3:39 am	ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။ ကျွန်မ အမြင် အလွယ်ဆုံးပြောရရင် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးပါ။ နှစ်ရှည်လများ ဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက ကျူးကျော်မြေမှန်းမသိလို့ နေလာသူတွေထားပါ။ အခုက ကိုယ်မပိုင် မဆိုင်တာ သိလျက်နဲ့ ၀င်ဆောက်နေတာ လွန်လွန်းပါတယ်။ သည်လို ကျူးကျော်သူတွေရော (ဘယ်လိုကျူးကျော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ဖယ်ခိုင်းချိန်မှာ လျောကြေး မပေးသင့်ပါ။ ကျွန်မ အဘိုးအဘွားပိုင်မြေကို အိမ်ခြေ ၂၀ ကျော် ကျူးကျော်ဝင်ဆောက်နေတာ ရှိပါတယ်။ နေ၀င်းလက်ထက်က ပြည်သူပိုင်ဆိုပြီး သိမ်းသွားပြီး အဒေါ်တွေ လက်ထက်မှာ ပြန်ပေးပေမယ့် ကျူးကျော်တွေကို ဖယ်ခိုင်းခ မတတ်နိုင်၊ သူတို့ကလဲ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ လာဘ်ထိုး၊ သူတို့ဘက် ပါအောင်လုပ်ထားလို့ မြေပိုင် ဂရန်ရှိလျက် ထိုင်ကြည့်နေရတာ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဥပဒေစိုးမိုး၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းရင် (ဒီမိုကရေစီ ရှိလျှင်) ကျွန်မတို့က မြေပိုင်ရှင်အမှန်တွေပါ။ အခုတော့ ဖယ်မပေးချင်ရင် မြေကွက်တွေကို ခွဲရောင်းပေးမယ်။ လက်ရှိပေါက်ဈေး မဟုတ်ပဲ တန်သင့်တော် ဈေးနဲ့ ပေးကြပါ ဆိုတာတောင် မ၀ယ်ချင်ကြဘူး။ သည်လို မိုက်လို့ ဖျာဝင်ခင်းသူတွေကိုတော့ လျော်ကြေးတောင် မပေးပဲ ဘူဒိုဇာနဲ့ ထိုးချသင့်ပါတယ်။
Reply	မင်းခေါင် February 19, 2013 - 12:30 pm	ခက်တာပဲ ကျူပ်တို့နိုင်ငံမှာ အုပ်ချူပ်သူရော အုပ်ချူပ်မခံတွေရော အမိုက်ပြိုင်နေကြတယ်
ကဲယဉ်ကျေးလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ အစိုးရရေ ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
သူမနာ၊ ကိုယ်မနာ ဖြေရှင်းချက်မျိူးရပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်
Reply	သစ္စာဖြူ February 20, 2013 - 9:41 am	စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို လိုက်လံဖြေရှင်းတာနဲ့
တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံမရှိလို့ခိုးတဲ့သူကိုပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူခိုး နည်းမ
သွားနိုင်ပါဘူး။ ပိုပြီးတော့များလာစရာပဲရှိပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးနေမှုများဟာ အုပ်ချုပ်သူကော အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားမှာပါ ရှိနေတဲ့အတွက် စိတ်ဓါတ်ကို ပဲ အချိန်ပေးပြီး ပြု
Reply	bala February 20, 2013 - 10:15 am	စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ဖြစ်ခြင်တိုင်း ဖြစ်နေကြပါလားဟရို့
အခြေခံစားဝတ်နေရေး ပြဿနာရှိသူက အနည်းစု
အလစ်သုတ် အလွယ်ယူ အခွင့်အရေးချောင်း အမြတ်ထုတ်သမားတွေက အများစုပါဝင်နေမှာပါ။
ကဲ.. ကိုရွှေဒီမိုကရေစီသမားတွေသမားတွေကရော ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ။
Reply	angel February 20, 2013 - 12:57 pm	နောက်ကွယ်မှာကြိုးကိုင်သူရှိမယ်ထင်တယ်လို့မပြောနဲ့တော့ရှိကိုရှိနေတာ။
Reply	kumudra February 21, 2013 - 10:17 am	This lawless action destroy our effort to democracy.
Nothing to do with poverty or no reason to do this kind of invasion. There are many honest poor people in the country not do this.
If thoes lands were not belong to those invaders in the past,Government should take legal action seriously, otherwise many lawless groups will do the same way all over the country.
Will human rights group or democracy groups shout and protect/backup for the lawless invaders backup or protect the law?
တခြားဖတ်စရာများ မာမာသန်သန် ကိုယ်ရည်သွေးပြချင်တယ်
သူပုန် ကျောင်းသားတဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (၆)
တရုတ် စီမံကိန်းတွေနဲ့ ရခိုင်ဒေသ ရလဒ်
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (၅)
အစိမ်းရောင် နယ်နိမိတ်မျဉ်း ပါးပါး